सर्वाधिक खोजी गरिएकी १५ बर्षिया किशोरीको शंकास्पद शव जङ्गलमा फेला
मलेसियाको जंगलमा दश दिनअघि बेपत्ता भएकी एक आइरिस किशोरीको शव फेला परेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। ती किशोरीको खोजीमा मलेसियाली सैनिक, प्रहरी र अरु खोजकर्ता संलग्न भएका थिए। नोरा क्वोरिन नाम गरेकी १५ वर्षीया किशोरी गत अगष्ट ४ मा बेपत्ता भएकी थिइन्।
उनी बेलायतबाट घुमघामका लागि मलेसिया आएकी थिइन्। परिवारका सदस्यले उनी अपहरणमा परेको आशंका गरेका थिए, तर मलेसिया प्रहरीले बेपत्ता भएको भन्दै खोजी कार्य तीब्र बनाएको थियो। राजधानी क्वालालम्पुरबाट निकै टाढाको डुसुन रिसोर्ट नजिकको घना जंगलमा बेपत्ता भएको आशंकामा नोराको खोजी गरिएको थियो। तीनसय ५० जनाभन्दा बढी व्यक्ति उनको खोजीमा परिचालन गरिएका थिए।
खोजीका क्रममा हेलिकोप्टर, ड्रोन, तालिमप्राप्त कुकुर र गोताखोर प्रयोग गरिएको थियो। खोजीमा सघाउन बेलायत, आयरल्यान्ड र फ्रान्सका प्रहरीले पनि सहयोग गरेका थिए। विदेशमा बेपत्ता हुने बेलायतीको खोजीमा सहयोग गर्ने लुसी ब्ल्याकम्यान ट्रस्टले एक किशोरीको शव जंगलमा फेला परेको जनाएको छ।
तर त्यो शव नोराकै हो भनिहाल्ने अवस्था नरहेको ट्रस्टको भनाई छ। उक्त ट्रस्टले थप विवरण दिन अस्वीकार गरेको छ। ट्रस्टले फेला परेको शव परीक्षणका क्रममा रहेको जनाएको छ। परिवारका सदस्यहरुले नोरालाई फेला पार्ने व्यक्तिलाई ११ हजार ९०० अमेरिकी डलर दिने घोषणा पनि गरेका छन्। सानैदेखि मानसिक रूपमा स्वस्थ नरहेकी नोरा राम्रोसँग बोल्न र लेख्न सक्दिनन्।
को ठूलो, मन्त्री कि प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार ?
नेपालको मन्त्रिपरिषद बैठकमा भारतीय सचिब, रसुवागढ़िमा नुनको जोहो !
क्याट्रिनालाई पछि पार्दै हिना बनिन् तेस्रो 'सेक्सिएस्ट एसियन वुमन'
राष्ट्रियसभा निर्वाचन आगामी माघ ९ गते हुने
रियालिटी शो ‘द लिडर’को घोषणा, बाबुरामदेखि रविन्द्रसम्म निर्णायक
विद्युत प्राधिकरणको चमत्कार : वित्तीय प्रगति १०२ प्रतिशत
‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ को पहिलो गीत सार्वजनिक (भिडियो)